Myanmar has agreed to appointment of U Ko Ko Latt, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Saudi Arabia, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the State of Qatar – Ministry of Foreign Affairs
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Ko Ko Latt, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Saudi Arabia, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the State of Qatar.
Dated. 20 January 2015
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုလတ်အား ၄င်း၏လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် ကာတာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ဝ ရက်